साेनम कपुरले गरिन् विहे- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
साेनम कपुरले गरिन् विहे
काठमाडौँ — दिल्लीका चर्चित व्यापारी आनन्द अहुजासँग बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् ।
चार वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरुले विवाहमा परिणत गरेका हुन् । धार्मिक विधि अनुसार उनीहरुले म‌ंगलबार विवाह गरे ।
विवाह समारोहपछि मंगलबार साँझ दुवैले मुम्बई स्थित लिला होटलमा ‘ग्राण्ड पार्टी’ दिएका थिए । पार्टीमा बलिउडका हस्तीहरुको उपस्थिती थियो ।
त्यहाँ भारतीय धनाढ्य मुकेश अब्बानी, बलिउडका अमिताभ बच्चन,सलमान खान,शाहरुख खान,शैफअलि खान,अभिषेक बच्चन, रणविकर सिंह, कट्रिना कैफ, अलिया भट्ट, रणविर कपुर, रानी मुखर्जी, कंगना रानावत, काजोल देवगन, करिस्मा कपुर, अभिशेषक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शहिद कपुर,सत्रुधन सिन्हा,टिना अब्बानी, करण जोहर,रेखा, शिल्पा शेट्टि लगायत अन्य कलाकारको उपस्थिती थियो ।
सोनम र आनन्दको विवाह पार्टीमा शाहरुख र सलमानले डान्स गर्न थालेपछि पार्टीमा थप रौनकता छाएको थियो । उनीहरुले करणअर्जुन फिल्मको 'ये बन्धनन ताे' गीत समेत गाएका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ १७:००
डरलाग्दो छ विदेशमा नेपाली श्रमिकको मृत्युदर
चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा ६०८ को मृत्यु
वैशाख २६, २०७५ रासस
काठमाडौँ — सप्तरीका ४४ वर्षीय दशनराम मोची रोजगारीको सिलसिलामा दुबई गएको चार महिना नबित्दै परिवारले उनी लडेर घाइते भएको खबर पायो । घाइते भएको २४ घण्टामै उनको निधन भयो ।आफू काम गर्दै आएको निर्माण कम्पनीको भवनबाट लडेर घाइते भएका मोची गत असोज ३१ गते पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए ।
गत माघ २२ गते घाइते भएपछि उपचारार्थ उनी दुबईकै अस्पतालमा भर्ना भए। चिकित्सकले उनलाई बचाउन सकेनन्। माघ २३ गते बिहान निधन भएका मोचीको शव नेपाल ल्याउन भने झण्डै तीन महिना लाग्यो। उनको शव गत चैत ४ गते मात्रै नेपाल ल्याउन सकियो।
क्षतिपूर्तिका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा भेटिएकी उनकी शोकाकुल श्रीमती राजकुमारी राम भन्छिन्, 'शवसँगै कम्पनीले पठाएको मात्र रु चार हजारले किरिया खर्चसम्म पनि टरेन। कम्पनीले पहिलो महिनाको तलब पठाए पनि बाँकी महिनाको रकम अहिलेसम्म हात परेको छैन। पठाइएको छ भन्ने जवाफ मात्र पाएकी छुँ।”
त्यस्तै, १६ वर्षीया छोरी ताराकुमारी राम अहिले कक्षा ७ मा अध्ययनरत छिन्। तेह्र वर्षीया अर्की छोरी मालाकुमारी कक्षा २ मा पढ्छिन्। दुई छोरामध्ये देवकुमार राम ७ वर्ष र आशाकुमार राम ५ वर्षका भए। मृतकका दुवै छोरालाई अहिलेसम्म पनि विद्यालय भर्ना गरिएको छैन।
“भाइ त मर्‍यो अब भाइका छोराछोरीको मात्र चिन्ता छ,” मृतकका दाजु बिन्दश्री मोचीले भने, “विदेश जाँदा साहुसँग लिएको रु एक लाख ४० हजारको ब्याजसमेत तिर्न सकिएको छैन।” भाइको मृत्युपछि भाइको परिवारको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा थपिएको उनले बताए।
खरले छाएको घरबाहेक जग्गा जमिनको नाममा मृतकको परिवारको केही छैन। परिवारमा छ छोराछोरी र श्रीमती छन्। नेपालमा रहँदा मजदुरी गरेरै परिवार धानिरहेका मोची सप्तरीकै अपरिचित तुनाराम भन्ने व्यक्तिको माध्यमबाट रोजगारीका लागि दुबई पुगेका थिए।
त्यस्तै, चितवन जिल्ला कठाइकी २० वर्षीया विपना चौधरीले कहिल्यै पनि सोचेकी थिइनन् श्रीमान्‌सँग सदाका लागि बिछोडिन्छु भन्ने। पाँच वर्षअघि मात्रै प्रेम विवाह गरेकी चौधरीका पति आशिष चौधरी विवाहपछि पोखरामा गई ग्रिलसम्बन्धी काम गरिरहेका थिए। उक्त कामबाट परिवार धान्न पुग्ने भए पनि साउदी अरबमा रहेका उनका काका आशारामले नेपालमा भन्दा विदेशमा राम्रो कमाइ हुने भनेपछि उनले उतै जाने सोच बनाए। काकाले पनि उतैबाट प्रवेशाज्ञा पठाइ दिए र उनी कतार गए। तर, काम गर्न गएको डेढ वर्षमै उनले ज्यान गुमाए।
मृतकको दाबी रकम बुझ्न बोर्डमा आएकी मृतककी पत्नी चौधरीले भावुक बन्दै भनिन्, “उहाँ बित्नुभएको खबर पाएको अघिल्लो रात हाम्रो फोनमा कुरा भएको थियो। अचानक बिहान उहाँको मृत्यु भयो भन्ने फोन आउँदा ममाथि आकाशै खसे जस्तो भयो।” आशिषको २०७४ साल चैत १३ गते मृत्यु भएको थियो।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा महिला २४ र पुरुष ७८७ गरी जम्मा ८११ जनाको मृत्यु भयो। आव २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार महिला १५ र पुरुष ५९३ गरी जम्मा ६०८ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। मृत्युको संख्यामा खासै कमी आएको पाइएको छैन। आव २०७३/७४ मा महिला १८ र पुरुष ७३८ गरी जम्मा ७५६ जनाको मृत्यु भएको थियो।
आव २०७२/७३ मा
मुटुसम्बन्धी रोगका कारण १४८
आत्महत्याका कारण १०९
कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ८१
प्राकृतिक मृत्यु २४१
सडक दुर्घटनाबाट १०३
अन्य कारणबाट २७
आव २०७३/७४ को तथ्यांकअनुसार
मुटुसम्बन्धी रोगका कारण ६४
आत्महत्याका कारण ९०
कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ६१
प्राकृतिक मृत्यु २५२
सडक दुर्घटनाबाट १२२
हृदयाघातका कारण ६४
अन्य कारणबाट ८०
चार व्यक्तिको मृत्यु अझै अनुसन्धानका क्रममा छन् भने १८ मृत्युबारे अझै जानकारी हुन सकेको छैन।
आव २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक
मुटुसम्बन्धी रोगका कारण ५३
आत्महत्याका कारण ९९
कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ४४
प्राकृतिक मृत्यु ९८
बिरामी भएर ४७
सडक दुर्घटनाबाट ९३
हृदयाघातका कारण ९४
अज्ञात मृत्यु ११
अन्य कारणबाट ३६
थप ३२ को मृत्यु अझै अनुसन्धानका क्रममा छन्।
आव २०७२/७३ मा कुन देशमा कतिको मृत्यु?
दक्षिण कोरियामा १३
संयुक्त अरब इमिरेट्समा ५४
साउदी अरेबियामा २२३
आव २०७३/७४ मा कुन देशमा कतिको मृत्यु?
दक्षिण कोरियामा ११
संयुक्त अरब इमिरेट्समा ४५
साउदी अरेबियामा २५१
आव २०७४/७५ को चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक (कुन देशमा कतिको मृत्यु?)
दक्षिण कोरियामा १८
संयुक्त अरब इमिरेट्समा ६९
साउदी अरेबियामा १५५
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रोजगारीको करार अवधि नसकिइकनै नेपालमा बिदामा आउँदा मृत्यु हुनेको तथ्यांकसमेत बोर्डले राख्ने गरेको छ। अहिलेसम्म नेपालमै आएर मृत्यु भएपनि क्षतिपूर्ति बापतको दाबी रकम भने उपलब्ध गराउने गरिएको छैन। तर रकमका लागि भने २०७२ सालदेखि नै निवेदन पर्ने गरेको जानकारी बोर्डले दिएको छ।
श्रम कार्यालयले रोजगारदाता कम्पनीबाहेक अन्य माध्यमबाट रोजगारीका लागि विदेश नजान बेला बेलामा सूचनासमेत प्रकाशन गर्ने गर्छ। आफू जाने कम्पनीबारे बुझ्दै नबुझी र सूचनाको ख्यालै नगरी रोजगारीका लागि युवा विदेशिने गरेका छन्। रोजगारदाता कम्पनीबाहेक अनधिकृत तवरले विदेश जानेहरु बढी दुर्घटनामा परेको घटना बाहिर आउने गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्वन बोर्डका सूचना अधिकारी पवित्रा घिमिरे खनालले बताइन्। “बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक श्रमिकका लागि तालीम दिने व्यवस्था गर्दै आएको भए पनि बिना तालीम नै उहाँहरु विदेश जानुहुन्छ,” उनले भनिन्।
विदेशी भूमिमा काम गर्न जाने जो कोहीले प्रथमतः आफ्नो पेसामा दक्षता हासिल गर्नुपर्छ भन्ने नीति सरकारले बनाइदिए पनि स्वयम् श्रमिकले नै त्यसको पालना गर्ने गरेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको आकस्मिक मृत्यु भएमा बोर्डले रु सात लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। बोर्डले श्रम गर्न गएको समयावधि सकिएको एक वर्षपछिसम्म पनि मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ १६:४२